Uzo okporo uzo ugboala nke Istanbul-Izmir, Toll na Toll Calculator: M ruru nke ikpeazu n'ime otu n'ime uzo okporo uzo Turkey kachasi mkpa. Marmara na Aegean ga-anọzi nso. N'agbata Istanbul na Izmir, [More ...]
Onye isi obodo nke Bursa nke Obodo Bursa Alinur Aktaş bịanyere aka n'akwụkwọ ndekọ ahụ banyere nyefe usoro Line Rail System Hospital Rail na Mịnịstrị nke Transportgbọ njem na akụrụngwa emere. Ochichi nke ndi Minista kwuru si, "Usoro Mbupu nke Obodo, [More ...]
ESHOT General Directorate ka emere ka o fee obodo Izmir n'ọtụtụ ebe dịka Ọkụ eletrik, Mmiri, Gasgbọ mmiri na Gas, nke jikọtara na Izmir Metropolitan Municipal, nwere mmefu ego ọzọ, dịka TEK na İZSU. [More ...]
Uzo ebe Emay Engineering na Consulting, nke Ndi Isi Obodo Obodo Istanbul mepere emepe, na-ahụ maka nlekọta ụlọ na ọrụ ndị ọrụ Aga Energy; Ọ dị ihe dịka 13,5 km ogologo ma mejupụtara ụgbọ 12. Usoro gị zuru ezu [More ...]
Map na ọdụ ụgbọ mmiri nke Mamak
Amsterdam Subway na Map Map
Gbọ njem ọha na Amsterdam bụ bọs na tram. E nwere ahịrị anọ dị na obodo a, ahịrị nke ise na-arụ ọrụ (mana ọ na-ewe ihe na -adịghị nwayọ ike iji zere imebi udidi eke obodo ahụ). Ọzọkwa ọtụtụ okporo ụzọ [More ...]
Emere Tiğli Nrara Ekele gụnyere na Mmemme Etiti ..! Mgbe nti obi ọmịiko Corona gasịrị
Onye Isi Obodo Mayor Izmir Tunç Soyer, Karşıyaka- Etufu ụzọ dị mkpa na ụgbọ ala ebumnuche ezubere ije ozi n'etiti Çigli. Onye isi ala Soyer kwuru n ’ozi twitter ya nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru. [More ...]
Ankara-Istanbul elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè ahụ a na-wuru na Turkey n'etiti Ankara na Izmir obodo. Railgbọ okporo ụzọ 508 dị ogologo nke ga-amalite site na Polatlı nke Ankara ga-akwụsị na Konak district nke Izmir. Ugboro abụọ egwu, eletrik [More ...]
TCDD Railways Map Ugbu a: A na-egosi gị TCDD Railways Map ugbu a na nnukwu mkpebi siri ike. I nwekwara ike ibudata maapụ World Railway ugbu a na saịtị anyị. Akụkọ banyere ụzọ ụgbọ oloko, Septemba 23, 1856 [More ...]
Onye isi oche Seçer kọwara ụmụ akwụkwọ Mersin Metro Project
Onye isi obodo nke Mersin Obodo ukwu Vahap Seçer sonyeere ụmụ akwụkwọ mahadum na mmemme a na-akpọ "Mayor Seçer na-agwa Rail System nke Mersin" na oku nke Civil Engineering Student Group. Ajụjụ ụmụ akwụkwọ gbasara Sisera Mersin [More ...]
Konzọ KonyaRay na Nkwụsị
Kayacık - si Konya Railway Station, nke bụ 26 km ogologo ọhụrụ okporo ígwè oru ngo, "na Republic of Turkey State Railways maka KONYARAY signatures na Konya Metropolitan Municipality e tụfuo. Gọvanọ Konya na emume ịbịanye aka [More ...]
Turkey, lọjistik emmepe ime ka $ 1 enweta puku ijeri mbupụ akụrụngwa na oru ngo nwetara underway. Lọ ọrụ 25 nke ogige ọrụ 9 ahụ zubere malitere ọrụ. Lọ ọrụ enyemaka atọ, ndị ejiri rụchaa ya, adịla njikere imeghe. [More ...]
Istanbul metro map nke 2020: Site na ihe eji wuo obodo metroo nke ga-ebido site n’afọ na-eso ya, na akara nke 2030 kilomita na njedebe nke 776, Istanbul bụ netwọkụ metrolo nke abụọ kachasị ogologo n’ụwa n’oge New York gasịrị. [More ...]
Hgbọala ndị na-ebugharị ndị njem nke Kayseri bu ndị njem 135 nde
Obodo Kayseri buru ihe ruru nde mmadụ 2019 na 135 site na ụgbọ njem ọha na etiti obodo. Ationgbọ njem obodo ukwu Inc. transportgbọ njem ọha n’okpuru ikike nke ndị njem nde 135 n’afọ gara aga 69 [More ...]
Mersin Metropolitan Mayor Vahap Seçer zutere ndị ọchụnta ego nke ndị otu nzukọ na nzukọ nke Mersin Industrialists na Association Ndị Azụmaahịa (MESİAD) Onye isi ala Hasan Engin haziri. N’ịkọwa itinye ego ha na Mersin [More ...]
Map nke Antray - Antalya Tram
Ejiri 2010 rụọ ọrụ na Antalya site n'aka Obodo ukwu nke Antalya. Etap Light Rail line na-amalite site na mpaghara Fatih ma kwụsị na Meydan ọdụ mpaghara. Ahịrị gbasara 1 km. Ndị njem njem 11 [More ...]
Map nke Essen
Essen Metro Map: Ọtụtụ mmadụ na-ahụ Essen dị ka isi obodo nke ike ala. Ọ bụ ụlọ nke nnukwu ụlọ ọrụ eletrik abụọ, E.ON SE na RWE AG. Ikekwe n'etiti narị afọ nke iri abụọ [More ...]
Anzọ ụgbọ elu Istanbul Ankara Dị Ego Dị Mkpa na 2020
Kwụsị okporo ụzọ okporo ụzọ ụgbọ elu nke Ankara dị elu nke 2020: Ankara Istanbul High Speed ​​Train akara 9 kwụsịrị Polatli, Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Pamukova, Sapanca, Izmit, Gebze na Pendik kpebisiri ike. Ankara [More ...]
Njem Njem nke Mọdụl Mịnịstrị nke Madrid na Ahịa Tiketi: Madrid metros nwere njem nde 560,9 otu afọ dị adị kemgbe 1919 ma ọ bụ Metro de Madrid na-arụ ọrụ. Networklọ ọrụ ọdụ ụgbọelu 13 ahịrị na 182,1 kilomita [More ...]
Gülermak họọrọ Edilon Sedra EBS Ngwọta maka Subaw Subway
Gülermak, bụ onye rụrụ ọrụ ụgbọ ala kacha ibu na Eastern Europe, họọrọ okporo ụzọ (ụzọ okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè) n'okporo ụzọ Warsaw na Poland. [More ...]
Emechara Nzukọ Mgbakọ Gaziantep Gaziray Commuter Line, ozi gbasara ọrụ 5 dị n'okpuru ala nke arụpụtara maka oru ngo Gaziray. Onye isi obodo nke Obodo isi obodo Fatma Şahin [More ...]
Ankara Metro Stations na Flight Time Map: ọha iga ọrụ Ankara, isi obodo nke Turkey, nke Ankara Metropolitan Municipality General Directorate nke Ego okporo ígwè iga netwọk. Njikwa ụgbọ okporo ígwè Ankara dị [More ...]
Denizli Izmir Train Timetable Map na Ahịa Tiketi: Izmir Basmane Denizli Regional Train na-ebugharị site na CDgbọ njem TCDD. [More ...]